ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E Mrs. Tone Tinnes နှင့်အဖွဲ့အားတွေ့ဆုံ။ – Agri Digit News
Posted on Author adminComments Off on ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E Mrs. Tone Tinnes နှင့်အဖွဲ့အားတွေ့ဆုံ။
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ သည် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ၊ ဦးစီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်များနှင့်အတူ ဇူလိုင်လ ၉ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီ အချိန်က ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ နော်ဝေနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E Mrs. Tone Tinnes နှင့်အဖွဲ့အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ ၌ တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာ-နော်ဝေ နှစ်နိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုစီမံကိန်းများ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ အား ဆွေးနွေးသည်။
နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးစဉ် အစိုးရ၊လုပ်ငန်းရှင်၊လူထုအဖွဲ့အစည်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် ပင်လယ်ဂေဟစနစ် ရှင်သန်ကြီးထွားလာစေရေးကို အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရန် ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် နော်ဝေနိုင်ငံ၊ အော်စလိုမြို့၌ ကျင်းပမည့် “The Our Ocean Conference” ညီလာခံကျင်းပဆောင်ရွက်မည့်အခြေအနေများကိုလည်းကောင်း၊ အသေးစား စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ အခြေစိုက် Stromme Foundation တို့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် “မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ လူမှု စီးပွားဘဝ တိုးတက် မြင့်မားလာရေးလုပ်ငန်းများ” စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာများ၊ မြန်မာ-နော်ဝေ နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ငါးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများ အား ဆွေးနွေး ကြသည်။
FAO၏ အစီအစဉ်အရ မြန်မာနိုင်ငံပိုင်နက်ပင်လယ်ရေပြင်အတွင်း ငါးသယံဇာတများ တည်ရှိမှု အခြေအနေနှင့် ရေငန်ဂေဟဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ကို နော်ဝေနိုင်ငံ Institute of Marine Research မှ Dr. Fridtjof Nansen ၏ သုတေသနရေယာဉ်ဖြင့် လေ့လာမှု(၅)ကြိမ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ သုတေသနရလာဒ်များကို အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ငါးလုပ်ငန်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အစီအမံများ ချမှတ်နိုင်ခဲ့ကာ ဝန်ထမ်းများ၏ သုတေသနလုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။
မြန်မာ-နော်ဝေ ငါးလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ရန် နှစ်နိုင်ငံအကြား နားလည်မှုစာချွန်လွှာကို ၂၀၁၇၊ ဇူလိုင်(၆)ရက်နေ့ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး သတင်း အချက်အလက်ဆိုင်ရာစနစ်ဖော်ဆောင်ခြင်း၊ ငါးလုပ်ငန်းသုတေသနစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး၊ ရေငန်ငါးမွေးမြူရေးသုတေသန နှင့် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး ၊ ငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ မူဘောင်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စသည့်လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရန် နော်ဝေနိုင်ငံမှ ရေငန်ငါးသုတေသနဌာန နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန တို့အကြား သဘော တူညီချက်နားလည်မှုရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆက်လက် အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။